वाइडबडी विमान अनियमितता प्रकरणमा के गर्दैछ अख्तियार? :: PahiloPost
वाइडबडी विमान अनियमितता प्रकरणमा के गर्दैछ अख्तियार?
10th January 2019, 03:54 pm | २६ पुष २०७५
काठमाडौं: वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिपछि अझै तीनवटा निकायले छानविन गरिरहेको छ।
वाइडबडी विमान अनियमितता प्रकरणमा के गर्दैछ अख्तियार? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।